प्रकाश सपुतले त्यस्तो के भने ? जसले गर्दा अन्तर्वातामा नै रोइन् ज्योती मगर (भिडियो सहित) | भिडियो
July 2, 2021 NepstokLeaveaComment on प्रकाश सपुतले त्यस्तो के भने ? जसले गर्दा अन्तर्वातामा नै रोइन् ज्योती मगर (भिडियो सहित)
उत्सव रसाइलीले तयार पारेको कार्य’क्रममा युट्यु’बशोमा गाएक प्रकाश सपुत र गायिका ज्योति मगर अतिथि थिए सो कार्यक्र’मका कुराकानी चल्दै गर्दा प्रकाशले भनेका थिए आज भन्दा चार पाँच वर्ष अगाडि ज्योति दिदीको नराम्रो कुराह:रूको बढी चर्चा भै रहँदा मैले कविता लेखेको थिए कार्यक्रम संचा’लकले सुनाइदिनु भनेपछि सुना’एका थिए सुनेर आफूलाई समाल्न नसक्ने गरी भावुक भइन् ज्योति।
लोक गायी’का तथा कला:कार ज्याती म’गरलाई निकै बिन्दास महिलाका रुपमा हेरिन्छ । उनी गायनमा मात्र नभएर नाचमा पनि उत्तिकै पारंगत छन् । उनले एक नाच प्रतियो’गीमा पनि निकै राम्रो प्रतिभा देखाइन् । उनी गीत गाउँदा संगै स्टेजमा नाच्छिन् । त्यसैले पनि उनको माग यस्ता कार्यक्रम’हरुमा हुने गर्छन । तर निकै फरासिली र बोल्न नहिचकि:चाउने ज्यातीले ब्यक्ति’गत जिवनमा भने सोच्ने नस’केका घट’ना भोगेकी छन् ।
उनी महिला माथि इंकित गरेर बनाइए’का कतिपय भनाई प्रति ज्यो’ती सह’मत छैनन् । भन्छिन्, एउटा घर राम्रो हुन महिला’को निकै राम्रो भूमिका हुन्छ भनिन्छ त्यो भनाई प्रति म सहमत छैन । पुरुषको कुनै जिम्मेवारी हुँदैन ? उनको प्रश्न छ । उनले आफु दागंवाट काठमाडौ आएर आफ्नो ब्य’वसायीक जिवन सुरु’वात गर्दाको’ अनुभवले उनको आँखामा आँशु आयो ।
आफुलाई अलि’कति भाग्यमानी भएको ठान्ने ज्योती आफु नि ड र भएका कारण हतो’स्तसाही नभएको बताइन् । उनले भर्खर काठ’माडौ आउँदा देखि नै काम पाएका कारण आर्थिक रुपमा सम’स्या भोग्न नपरे पनि कामलाई नराम्रो सोचेर आफु मा’थि राख्ने भनाईले कहिले काँही निकै चित्त दुखेको बताए:की छन् । भिडियो हेरौं…
घरबाट भागेर काठमाडौं आएका १४ बर्षे जनकलाई शिशिर भण्डारीले ‘मेरो अर्को छोरा’ भनेर चिनाएपछी- भन्छन् अंकलले धेरै गर्नुभयो (भिडियो हेर्नुस)
भाग्य न्यौपाने ले समेत लिएका थिए सन्तोषी को अन्तरवार्ता : अनाैठाे कला थियो उनीसँग , तर आज कुन पा’पीले गरिदियो वि’भ’त्स ह’त्या
फेरि पनि पोखरामा घ’ट्यो अत्य’न्तै दु:खद घ’टना (हेर्नुहोस् भिडियो)